I-Marek Hamsik Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE I-Marek Hamsik Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Marekiaro". Indaba yethu ye-Marek Hamsik Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomgomo wakhe wokufaka amagoli futhi azisize amandla kodwa abambalwa abheka i-Bio kaMark Hamsik eyithakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
UMarek Hamsik wazalwa ngosuku lwe-27th uJuly 1987 eBanska Bystrica, eSlovakia. Wazalelwa kunina, uRenata Hamsik noyise uRichard Hamsik.
Ukukhula eBanska Bystrica (okufanekiselwe ngezansi), idolobhana eliyaziwa ngokubaluleka kweMining kanye nezakhiwo zomlando, u-Oblak osemusha wayezungezwe uthando oluvela emndenini wakhe onothando wezemidlalo owasiza ukumisa endleleni yakhe yokuphila ekuqaleni kokuphila.
Umama kaHamsik wayengumdlali we-handball ngesikhathi esisodwa ngenkathi ubaba wakhe engumphathi weqembu lesihlanu laseSlovakia ngesikhathi sokuzalwa kwebhola lezinyawo. Ukuze enze umndeni wezemidlalo uphelele, udadewabo kaHamsik, uMikhaela wayengumdlali we-handball owadlala iqembu labo lakubo, eBanská Bystrica.
Kwakungokwemvelo uHamsik owayethonywe kakhulu nguyise ukuba acabange umsebenzi wakhe webhola lezemidlalo. Uxhaswe nge-Technical Know-How of uyise, uHamsik wathatha izinyathelo zakhe zokuqala ekuqeqesheni ubuchwepheshe ngendlela engavumelani nokubhalisa eqenjini elincane, uJupie Podlavice esikhundleni sokuqala eqenjini lakhe lakuleli dolobha, uDukla Banská Bystrica.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
Ukudlala iJudie Podlavice kwanikeze uHamsik ikhono elidingekayo elidingekayo ukuze ahambe kahle emaqenjini amakhulu asemphakathini uStevan Bratislava, iqembu likaHamsik liqhubekela phambili e-2002 ngaphansi kwezimo zokuzinikela njengoba ekhumbula eminyakeni edlule:
'Nginakho konke okushiwo abazali bami. Nakuba sasingewona umndeni ocebile, abazali bami bahamba ngobude ukuze bangisekele, kubandakanya ukuthengisa imoto kuphela esasinayo ukuze ngijoyine uSlovan Bratislava lapho ngineminyaka engu-14.
UHamkk wayengelona ozokwenza imihlatshelo yabazali bakhe njengoba enza konke okusemandleni akhe okuzitholela kakhulu ukubonakala kwakhe eSlovan ngaphambi kokudluliselwa kwakhe kwi-Club Club yaseBetalia yase-2004.
Ukuqala ngeqembu ngaphansi kwe-19, uHamkk wakhuphuka ukunyuka kweMeteor ngokusebenzisa izinkampani zokwenza i-Serie A yakhe yokuqala ku-2005 kodwa akazange ahlonishwe njengoBrescia njengoba iBrescia ehlulekile ukugwema ukuhoxiswa kulo nyaka.
Kodwa-ke, uHamshik waqhubeka nefomu lakhe eliphezulu elibonile ukukhishwa kukaNapoli ngemuva kokubhala imigomo eyishumi ekubukeni kwe-40 Serie B.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphakama Ekudumeni
KwakunguNapoli ukuthi uHamkk wathola ukunakekelwa okufanele okuqale ngemuva kokuthola ithuba lakhe ekuqaleni kukaCesena eCoppa Italia. Izinkathi ezintathu ezihamba phambili noNapoli bambona ehlanganisa imigomo ukucwiliswa kweMaradona njengomlando ohamba phambili weqembu.
Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba uHamsik athole umklomelo omncintiswano omdlali osemncane eSerie A owaziwa ngokuthi 'u-Oscar del Calcio' ngoJanuwari 2009. Umklomelo wawungowokuqala wohlobo lwawo ukuba unikezwe kumdlali ngaphandle kwezimpande zase-Italy. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Ubudlelwano
Lowo ocabanga ngamaphethini okuphindaphindiwe emisebenzi kanye nobuhlobo okhetha ukugijima emndenini ngeke afunde kakhulu impilo kaHamsik owanyathelisa izindlela zikayise (owayengumphathi we-football) ngokuthandana nokushada umdlali we-handball ( umdlalo ofanayo nomama kaHamsik ayebandakanyeka ngokugcwele).
U-Hamsik wayesebudlelwane besikhathi eside neyintombi yakhe noma wagulisa umkakhe, uMartina Franova.
UMartina Franova wayengumdlali we-handball owadlala eqenjini lakubo, iBanská Bystrica kanye nodadewabo kaHamsik, uMikhaela. Ubuhlobo bombhangqwana buvele ngesikhathi uHamsik eseBrescia futhi uye waqhakaza kusukela ngaleso sikhathi.
Le mbhangqwana idlule iminyaka ngaphambi kokushada ngo-4th of July 2014.
Inyunyana yabo ibusiswe ngamadodana amabili uChristian noLucas (owazalwa ngo-2010 no-2012) kanye nentombazane uMelissa, owazalwa ngoDisemba 2017.
Ngesikhathi laba bafana ababili beqalile ukusebenza emsebenzini webhola esikoleni esithinta u-Udinese, abalandeli abakwazi ukulinda ukubona ukuthi uMelissa uzogcina yini iphethini lomndeni ngokudlala i-handball.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuhlukunyezwa okuhlukile
NgoNovemba 2011, owesifazane okhulelwe kaHamk, uMartina Franova, waphonswa ngesibhamu, waxoshwa ngezinto zakhe eziyigugu futhi futhi washiya izintambo eNaples ngemuva kokuba abaphangi bebehamba eB BMW wayegibele.
Isigameko esenzeke amahora ngaphambi kokuba umdlalo weMamelodi Napoli ngoManchester City ungenzi lutho ukuphazamisa uHamsik owadlala umdlalo ngokugxila okugcwele.
Ukusheshisa ku-2013, UHamkik wabanjwa ngenkathi ushayela ngemuva kokudonsela kukaNapoli ngokungapheli ngokumelene neSampdoria. Kubikwa ukuthi abaphangi bayiqede ingilazi yemoto kaHamsik ngaphambi kokushayela isibhamu ebusweni bakhe.
U-Hamsik washiywa engenakho ukhetho kodwa ukuphoqelela izimfuno zabo njengoba beqedile nge-watch watch yakhe phakathi kwezinye izinto eziyigugu.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuthembeka kwiKlabhu
Ngesikhathi abadlali abanzi behlanganisa u-Edinson Cavani, u-Ezequiel Lavezzi noGonzalo Higuain behamba 'ngezinkampani ezinkulu', uHamsik wanquma ukuhlala naphezu kwentuthuko eyenziwe yiziNgisi ukuze amsayine amacala okuphanga naye nomkakhe okhulelwe. Ngenxa yalokho, uHamsik ugubha njengeqhawe lamanje lanamuhla lakaNapoli ngemuva kukaGeorge Maradona, oqoshwe ngamagoli eNapoli, evezwe yiqiniso.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Akuyona nje i-Shirt Number
I-shirt ye-17 isibe yi-Identi enkulu yamaHamsik ebonakala ekhonjiswe ngamakethi athatha inombolo ngesikhathi sokubonakala kokubili kweNapoli neSthimba kaZwelonke eSlovakia. Ngokusho kwe-skipper, isibalo esilandelayo se-17 sinendima ephindaphindiwe ngezinsuku zokuzalwa kanye nesikhathi sakhe, iqiniso elivezile ngesikhathi sokuxoxisana nabantu bezindaba.
'Ngazalwa ngo-27th lwenyanga yesikhombisa (ngoJulayi) ku-1987, ku-7pm,'
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Izizathu Ezibhekene Nesidlaliso
Isiteketiso sikaHamsik, 'Marekiaro' ubizwa ngegama lakhe elithi 'Marke' kanti elinye igama elithi "kiaro" likhokha intela emanzini ahlanzekile olwandle azungeze iNapoli amaNeapolitans abathanda kakhulu.
I-Marek Hamsik Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts-Izindaba zobuntu
Emkhakheni wokudlala, uye wachazwa njengomdlali osheshayo, onamandla, osebenza kanzima futhi ohlakaniphile, okwazi ukudlala ezindaweni eziningana ezihlaselayo.
Amandla akhe, ubuciko kanye namakhono akhe obuholi abonile ukuthi ukhonza njengomphathi weqembu lakhe lase-Italy uNapoli kanye nokukhonza njengomphini-mphathi wethimba likazwelonke laseSlovakia.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlakanipha kwakhe ngokomzwelo kanye ne-aura ye-comic relief ehambisana naye yizici eziye zamenza wazibala phakathi kwabanye abadlali futhi zamenza "abonakale engahleleki" nomaphi lapho eya khona.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Marek Hamsík yezingane kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Napoli Football Diary
I-Arkadiusz Milik Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Massimiliano Allegri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Kalidou Koulibaly Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Lorenzo Insigne Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
UMaurizio Sarri Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
Dries Mertens Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Gonzalo Higuain Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
U-Edinson Cavani Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Diego Maradona Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Luca Septhemba 19, 2018 Ku-5: 41 am
Igama lesidlaliso elithi "Marekiaro" lihlobene nenxenye encane yedolobha laseNaples elibizwa ngokuthi uMarechiaro. Yindawo encane ngamanzi lapho umuntu angabuka khona umuzi wonke waseNaples, kuhlanganise noMt. I-Vesuvius. Kuhle futhi uMarek Hamsik unikezwe isiteketiso esithi "Marekiaro" ngoba eminyakeni edlule ubelokhu ewuphawu lomuzi neqembu lethu. Isiqephu esinjalo sesidlaliso singumncoma omkhulu, futhi uHamsik uyayazi futhi uyayithanda. Ukuze uthole olunye ulwazi, cwaningo uMarchiaro, Posillipo, eNaples.